KDEnlive 21.08: kuvhura nezvakawanda zvitsva maficha | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Multimedia, Zvirongwa, Free Software
Kdenlive 21.08 Iyo ndiyo vhezheni nyowani inowanika yeiyi inonakidza chirongwa kubva kune iyo KDE chirongwa, icho chinouya nehukuru hukuru kune yayo injini uye nekuvandudza kune graphical mushandisi interface. Iye zvino inodawo iyo MLT7 macro, iine nguva nyowani yekudzokorora uye yakagadzikana uye yakapfupika kodhi kodhi.
Kdenlive pamwe ndeimwe yeiyo vhidhiyo vapepeti Yakawanda yakasimba uye yakakwana yemahara uye yakavhurika sosi software yeGNU / Linux. Iyo isiri-mutsara uye multiplatform chirongwa icho chinokutendera iwe kuti ugadzire inoyevedza multimedia zvemukati, ine akawanda maturusi, sarudzo uye mhedzisiro zviripo.
Kdenlive inotsigirawo maviri monitors, iine intuitive interface, ine yakawanda nguva yekuwedzera mifananidzo, mavhidhiyo emitambo yakawanda uye kurira, rutsigiro rwekugadzika, zvigadziriso zvekutanga, zviitiko, nezvimwe. Zvese pasina kukosha kweiyo yepamusoro vhidhiyo yekugadzirisa ruzivo ...
Pindai nhau kubva kuKdenlive 21.08 ndeiyi:
Kushandiswa kwesosi yakavhurika MLT7 (Media Lovin Toolkit) macro ye multimedia. Kutenda kwazviri, akateedzana maturusi anopihwa zviteshi, vhidhiyo edhita, multimedia players, transcoders, web transmitters, uye mamwe maapplication.
Iyo kodhi-inoenderana nekodhi yakadzokororwa zvachose, kugadzirisa maumbirwo emafaira uye kusunungura kana midhiya mafaera ari akawanda magigabytes muhukuru.
Iye zvino inoita kuti iwe ushandise mhedzisiro yekubata chete akasarudzika matunhu eiyo clip uchishandisa mamask, uye kwete iyo yese clip.
Yayo graphical interface zvakare ine akateedzana ekuvandudza. Maitiro ekufambisa clip zviri nyore, govera mapfupi, nyowani yekuraira bar kuti utsvage nyore nyore chero chiito (madingindira, mhedzisiro, mafaera, uye zvimwe).
Mamwe mabasa akagadziridzwa, senge Nguva Remap, mamepu matsva uye sarudzo, kuratidza zvigunwe mumaki paunenge uchisimudza mbeva pane clip clip, kugona kuwedzera mapfupi ezvimwe zvinodzokororwa mabasa, nezvimwe.
Rumwe ruzivo uye zvinyorwa - KDE chirongwa chewebhu webhusaiti Kdenlive
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » KDEnlive 21.08: kuvhura iine akawanda maficha maficha
Zink Vulkan mutongi anogara paMesa nekunakidza kusimudzira
Multizork: kuyeuka yakasarudzika vhidhiyo mutambo wema80s